မြေထဲပင်လယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မြေထဲ ပင်လယ် သည် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကုန်းတွင်း ပိတ်လု နီးပါး ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်တွင် ဥရောပ၊ တောင်ဘက်တွင် အာဖရိက၊ အရှေ့ဘက်တွင် အာရှတိုက်တို့ဖြင့် ဝန်းရံလျက် ရှိသည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ၉၆၅၀၀၀ စတုရန်းမိုင်ခန့် ရှိပြီး အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်သည့် ဂျီဘရော်လ်တာ ရေလက်ကြားသည် ၁၄ ကီလိုမီတာ (၉ မိုင်) သာ ကျယ်ဝန်းသည်။
ဥရောပ၊ အာရှနှင့် အာဖရိကတိုက်ကြီး ၃ တိုက်အကြား တွင် တည်ရှိသည် မြေထဲပင်လယ်သည်ကား ရှေးပဝေဏီမှ စ၍ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် ကျော်စော ထင်ရှားခဲ့သော ပင်လယ်ကြီး ဖြစ်သည်။ ထိုပင်လယ်ကို ဝန်းရံ လျက်ရှိသည့် အီတလီ၊ ဂရိ၊ ပယ်လက်စတိုင်း၊ အီဂျစ်စသော တိုင်းပြည်များတွင် ရှေးအကျဆုံး ယဉ်ကျေးမှုများ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်၌ လည်း မြေထဲပင်လယ်သည်ကမ္ဘာ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကိစ္စများ၌လည်းလည်းကောင်း၊ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ် ကိစ္စများ၌လည်းကောင်း၊ စစ်မက်ရေးရာ၌လည်းကောင်း အချက်အချာဒေသ ဖြစ်လျက်ပင်ရှိသည်။ မြေထဲပင်လယ် ဟူသော ပညတ်နှင့်အညီ ဤပင်လယ် သည် ကုန်းများ ဝန်းရံပတ်ထားလျက်ရှိသောကြောင့် ရေအိုင်ကြီးနှင့်တူသော ပင်လယ်ဖြစ်သည် မြေထဲပင်လယ် ကို အရှေ့ဘက်တွင် ဥရောပတိုက်၊ တောင်ဘက်တွင် အာဖရိကတိုက်တို့ ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ မြေထဲပင်လယ်သည် ၁၂ မိုင်မျှသာ ကျယ်သော ဂျီဗရော တား ရေလက်ကြားအားဖြင့် အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်လျက် ရှိသည်။
ဆူးအက်တူးမြောင်းသည် မြေထဲပင်လယ်ကို ပင်လယ်နီ၊ အာရေဗျပင်လယ်၊ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတို့နှင့် ဆက်မိစေသည်။ မြေထဲပင်လယ်၌ ရေလက်တက်ကြီး အများအပြားပင် ရှိလေရာ၊ အချို့မှာ ပင်လယ်ငယ်များ အနေနှင့်ပင်တည်ရှိ သည်။ ယင်းပင်လယ်ငယ်များမှာကား အီတလီနိုင်ငံကို ဝန်းရံလျက်ရှိသော တစ်ရီးနီးယန်း၊ အေဒြီယက်တစ်နှင့် အိုင်အိုးနီးယန်းပင်လယ်များ၊ ဂရိနိုင်ငံအရှေ့ဘက်တွင်ရှိသော အီးဂျီးယန်းပင်လယ်၊ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု၏ တောာင်ဖက်တွင်ရှိသော ပင်လယ်နက် အစရှိသည် တို့ဖြစ်၏။ ယင်းလက်တက်ကြီးများအားလုံးကိုပါ စုပေါင်း၍ ရေတွက်သော် မြေထဲပင်လယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းမိုင် ၁,၁၄၅,၁ဝဝ ခန့်ရှိပေသည်။ မြေထပင်လယ်ကို အကြမ်းအားဖြင့် အီတလီကျွန်းဆွယ်က နှစ်ပိုင်း ခွဲခြားထားသကဲ့သို့ ရှိ၏။ ဤသို့ ခွဲခြားလိုက်သော အခါမြေထဲပင်လယ်မှာ အရှေ့ဘက်ခြမ်း အနောက်ဘက်ခြမ်း ဟူ၍ ဖြစ်လာပြီးလျှင် အရှေ့ဘက်ခြမ်း၌ ရေသည်ပို၍ နက် လေသည်။ ပေ ၁၄,ဝဝဝကျော်မျှ အစောက်ရှိ၏။ အနောက်ဘက် ခြမ်းသည်ကား အနက်ဆုံးတွင် ပေ ၁၂,ဝဝဝ ကျော်သာ ရှိသည်။ မြေထဲပင်လယ်ရှိ ရေတွင်စပန်းခေါ် ပင်လယ်ရေမြုပ် အလွန်ပေါများသည်။ ဤပင်လယ်၌ ငါးအမျိုးပေါင်း ၄ဝဝ ကျော် ကျက်စား သည်ဖြစ်ရာ အခြား ပင်လယ်များထက် ငါးမျိုးပေါင်း စုံလေသည်။ ထို့ပြင် ဤပင်လယ်တွင်း၌ ကျွန်း အမြောက်အမြား ရှိလျက် အရေးပါ အရာရောက်ဆုံးတို့မှာကော်စီကား၊ ဆာဒင်းနီးယား၊ ကရိနှင့် ဆိုင်းပရပ်ကျွန်းတို့ ဖြစ်၍ သမိုင်းအရ ထင်ရှားလှပေသည်။ အီတလီနိုင်ငံမှ အီဗရိုမြစ်၊ ပိုမြစ်တို့သညလည်းကောင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ ရုန်းမြစ်သည်လည်းကောင်း၊ အာဖရိကတိုက်မှ နိုင်းမြစ်သည်လည်းကောင်း ဤမြေထဲပင်လယ်ထဲသို့စီးဝင်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ မြစ်အနည်းငယ်မှ စီးဝင်လာသောရေထက် ပို၍ ရေခိုးရေငွေ့အဖြစ်ဖြင့် ရေကိုစွန့်လွှတ်ရသောကြောင့်မြေထဲပင်လယ် သည် အကယ်၍သာ အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် ဆက်စပ်လျက် မရှိပါက ဆားအိုင်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်သွားရန်ပင် အကြောင်း ရှိလေသည်။
မြေထဲပင်လယ်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကုန်းမြေဒေသတို့ကို ရာသီဥတု အားဖြင့် ထူးခြားစေသည်။ မြေထဲပင်လယ် ရာသီဥတု ခေါ်သော ရာသီဥတုမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယင်းရာသီဥတုမျိုးမှာ ဆောင်အခါနွေး၍ စွတ်စိုလျက်၊ နွေအခါပူ၍ ခြောက်သွေ့ပြီးလျှင် ဆောင်းကူး၊ ဆောင်းနှင့် နွေကူးရာသီများတွင် မိုးရွာသည်။ စပျစ်သီး၊ လိမ်မော်သီး၊ မက်မွန်သီး၊ တည်သီးအစရှိသော အသီး များသည်ဤကဲ့သို့သော ရာသီဥတုမျိုးကို နှစ်သက်သည်။ မြေထဲ ပင်လယ်ကို ပတ်ရံလျက်ရှိသော ကုန်းမြေများသည် တောင်ထူထပ် သည်။ သို့အားဖြင့် ပြာလဲ့သော ပင်လယ်ရေပြင်ကို နောက်ခံလျက် ရှိသောကြောင့် သဘာဝရှုခင်း လှပသဖြင့် ထင်ရှားပေသည်။ မြေထဲပင်လယ်၏ သမိုင်းကို သုံးသပ်ရသော် မြေထဲပင်လယ်တွင် ဦးစွာကျက်စားသော လူမျိုးမှာ ဖီနီရှန်တို့ ဖြစ်၏။ ဖီနီရှန် လူမျိုးတို့သည် မြေထဲပင်လယ် တစ်လျှောက် ဂျီဗရောတား ရေလက်ကြားတိုင်အောင် သွားသောဟူ၏။ ထိုဒေသသို့ ရောက် လေသော်ကျောက်ဆောင်များပေါ်တွင် 'တိုး၍ မသွားရ' ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရသော စာတမ်းထိုးထားသည်ကို တွေ့ရသောဟူ၏။ သို့ရာတွင် ရဲရင့်လှသော ဖီနီရှန်လူမျိုးတို့သည် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ တွင်းသို့ ဆက်လက်သွားကြ၏။
ဂရိ၊ ရောမနှင့် ကားသေ့လူမျိုးတို့သည် ဖီနီရှန်လူမျိုးတို့ သွားရာ ခရီးကြောင်းအတိုင်း သွားကြသည်။ သို့ဖြင့် မြေထဲပင် လယ်သည် ကမ္ဘာတွင် အရေးပါသော ရေကြောင်းဖြစ်လာသည်။ ဝင်ပေါက်မှာ ဂျီဗရောတား ဖြစ်၏။ ရောမနိုင်ငံ ကောင်းစားစဉ်က မြေထဲပင်လယ်ကို ရောမလူမျိုးတို့ ကြီးစိုးခဲ့၏။ ခရစ် ၁၉၃ဝ ပြည့် နှစ်တွင် အီတာလျံ လူမျိုးတို့သည် မြေထဲပင်လယ်ကို ကြီးစိုးရန် ကြံစည်ခဲ့ကြသေးသည်။ ယဉ်ကျေးမှုသည် အနောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့သွားသော အချိန်တွင် မြေထဲပင်လယ်သည် အရေးမပါလှဘဲ ရှိသွား ၏။ သို့သော် ၁၈၆၉ ခုနှစ်၌ ဆူးအက်တူးမြောင်းကို ဖောက်လုပ် ပြီးစီးပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဥရောပတိုက် တောင်ပိုင်းနှင့် အာရှ တိုက်တို့ ကူးလူးဆက်ဆံရာ အဓိက ရေကြောင်းလမ်း ဖြစ်လာသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ဘောရာပေါင်းများစွာတို့သည် ဆူးအက်တူးမြောင်းကို ကူးဖြတ်လေသည်။
အယ်လ်ဘေးနီးယား: Deti Mesdhe [ˈdɛti ˈmɛsðɛ]
အာရပ်: البحر الابيض المتوسط‎‎, tr. āl-Baḥr āl-ābyaḍ āl-Mutawassiṭ [aːlˈbaħr aːlˈaːbjadˤ aːlmutawaˈsitˤ]
ကတ်တလန်: Mar Mediterràni(a) [ˈmaɾ məðitəˈrani(ə)]
ခေတ်သစ် ဂရိ: Μεσόγειος Θάλασσαcode: ell promoted to code: el , tr. Mesógeios Thálassa [meˈsoʝos ˈθalasa]
ဆလိုဗေးနီးယား: Sredozemsko morje [srɛdɔˈzéːmskɔ ˈmóːrjɛ]
↑ Pinet၊ Paul R. (2008)။ Invitation to Oceanography။ Jones & Barlett Learning။ p. 220။ ISBN 0-7637-5993-7။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြေထဲပင်လယ်&oldid=730155" မှ ရယူရန်
Tunisian Arabicဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။